Bravo Makis | mandimby maharo
Bravo Makis	Posted on 11 July 201211 July 2012 by Mandimby Maharo	Tompon-daka ny Afrika 2012 amin’ny baolina lavalava ny XV Makis de Madagascar. Miresaka io Fandresena azontsika nanoloana ny Namibiana tamin’ny Alahady 08 jolay tetsy amin’ny Kianjan’ny Mahamasina io avokoa ny olona rehetra. Nitondra fifaliana teo amin’ny fiainana andavan’andron’ny malagasy io amboara azo io. Nampitaintaina ary tena nampientam-po ny rehetra tokoa raha iny lalao iny. Tsy ireo izay nanatrika tetsy an-kianja ihany fa ny isan’tokatrany dia nanaraka izany tamin’ny fahitalavitra na tamin’ny onjam-peom-pirenena avokoa. Na ireo izay tsy dia mahalala firy ny momba ny lalao rugby na ireo izay efa mpakafy izany dia samy liana sy nitsanga-nitoetra nanaraka izany lalao izany.Dia miara mihoraka rehefa nisy ny baolilna maty, ary miara mampahery rehefa nisy tsy fahombiazana. Toa nijanona ny fotoana nandritra iny folak’andro iny. Firaisan-kina, io no naterak’ilay baolina. Firaisan-kinan’ny mpilalao aloha. Niray hina ihany koa ny mpijery baolina, ary niray hina nanaraka ho azy teny koa ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka.
Mandrika ny mpilalao Malagasy. Tsy tokony hisy adi-hevitra ny amin’io. Ary tsy tokony ho asiana resabe koa hoe inona no antony nandreseny. Tsy tokony ho asina fisalasalana fa aleo ho tazonina ilay hafaliana sy fietanam-po ny Alahady teo. Ary aoka tsy ho taitra amin’izay fanatsatsoana rehetra fa azo aloha ny anaram-boninahitra dia ampy izay. Avelao mba haharitra ilay firaisan-kina fa tsy izay baolina indray no ho entina hifanankianana sy hifamaliana eto. Aza araraotian havadika ho raharaha politika ny fanatanjahantena (toy izany koa ny fivavahana, ny zava-kanto sy izay rehetra mitondra fifaliana eo amin’ny fiainanan’ny Malagasy)
Ny mahonena manko dia toa efa ela tsy nahita fahombiazana isika Malagasy ka lasa tsy mahay mankafy intsony. Na dia efa eo an-tanana aza ilay fandresena dia mbola mahita hanakiviana ihany ireo izay tsy zatra fahombiazana. Maro ireo arararaotra iny fandresena ho lasa resaka politika. Aoka aloha atrehina ny fandresena azo taty afrika, izay amboara eran-tany any, aleo aloha ho any fa aza entina hanalokalofana ny fifaliana. Aleo mba fanana fifaliana ny Malagasy na dia ho ao anatin’ny fotoana vitsy monja ihany ary, alohan’ny iatrehany ny fifanintsanana amin’ny amboara eran-tany. Rehefa tonga izay dia ho hita eo izay ho atao. Ary amiko, rariny raha nahazo ireny mari-boninahitra ireny ry zalahy ao amin’ny ekipam-pirenea ireo. aleo mba izay mba nitondra firaisan-kina sy fifaliana mba omena izany fa tsy ireo izay manabe isa ny mpanakora hatrany no ho zaraina izany. Ary tsy maninona na dia nomena antapitrisa maro aza izy ireo satria tsapa sy hita ny vokatra, fa tsy izay rehetra manabe tarehy eny amin’ny fahitalavitra sy manao tsindrio fa lavo ny mpiarabelona no hizarana vola lava izay.
Nefa koa, aoka hotohizana ilay fiarahana mientana hahatratra tanjona iray. Tsy izay fandresena amin’ny baolina akory ny midika fa efa lasa lavitra isika Malagasy. Aoka hananana ilay toetsaina mahay manetry tena ka hahalalala fa dingana iny ary ho ohatra fa tsy tanjona. Aoke ho alavirina ilay toetsaina toy ny “andevo tafakatra am-batra ka tsy mahalala afa-tsy ny hanitsa-molaly”. Ho ohatra eo amin’ireo taranja hafa, ho ohatra eo amin’ny sehatra rehetra, ary ho ohatra eo amin’ny fiainam-pirenena mihintsy anie ireny fahombiazana ireny. Fahombiazana, tsy izany ve moa no ilaintsika amiza koa What is your problems?
2 thoughts on “Bravo Makis”	Tahina says:	11 July 2012 at 1604 08	Nahafinaritra iny fandresena iray iny ka 🙂
Reply	Mandimby Maharo says:	13 July 2012 at 1907 36	mba nahafinaritra satria nanome toky ny malagasy fa afaka manao zavatra tsara ihany isika rehefa hanao